December 2018 – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
“Gooftaanis warroota fayyyuu qabaniif guyya guyyaan isaanirratti dabalaa ture.”
Kaayyoon ijoo qophii barruu kanaa:-
Waa’ee fayyina dhala namaa ilaalchisee warroota karaa ifa ta’een hubachuu hin dandeenyeef waa’ee fayyinaa waan isaan haasa’an Kitaaba Qulqulluudhaan ala kan ta’e ta’uu isaa agrsiisuuf barbaadamee ti.
Warroota “Amantiidhaan qofa /amanuudhaan qofa/ fayyina.” jedhaniif barsiifatni isaanii dogongora akka ta’e ibsuu; sababni isaas amantiin hulaa/karra/ fayyinaa ti malee, mataa isaa ‘fayyina’ miti. Sababni inni ‘hulaa/karra / fayyinaa ti.’ jedhameef illee, isaan alatti /amantiin alatti/ gara kamiyyuu deemuun waan hin danda’aamneef dha.
Gocha fayyinaa isa Fannoo irratti taasifameen Addaam fi ijoolleen isaa maal irraa akka fayyan addeessuu/ibsuu/ dha.
Maal irraa fi akkamitti akka nufayyise ibsuuf; fayyina keenya haala kamiin raawwachuu akka qabnu hubachiisuudhaan warroota waa’ee fayyina ilma namaa ifa galeessatti hin hubanneef /warroota barsiifata dogoggoraa qabaniif/ deebii kennuuf fi addeessuuf dha.
Dhalli namaa abbooma Waaqayyoo diiguu isaatiin Waaqayyoo irraa adda bahe. Kiyyoo seexanaan qabamee, hammeenya diyaabiloosiin summaa’ee waggoota 5500f si’ool keessa jiraate. Kufaatii dhala namaa irraa eegalee fedhiin dhala namaa fayyina argachuu ture. Dhalli namaas abdii fayyinasaa Waaqayyoo irraa argatee abdiidhaan jiraate. Fayyini dhala namaa abdii fayyinaa Waaqni kenneen, raajiin ni dubbatame, soomanni ni labsame. Read more
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 MK-IT http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png MK-IT2018-12-07 20:31:312019-01-04 14:12:03Dubbii fayyinaa Mana Kiristaana Ortodoksi Tawaahidoo Itiyoophiyaatti